အောင်မြင်ချမ်းသာချင်သူတိုင်း မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၀)ခု – Gentleman Magazine
အောင်မြင်ချမ်းသာချင်သူတိုင်း မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၀)ခု
မေးခွန်းတွေဟာ ဘ၀ကို ထင်ဟပ်နေပြီး မေးခွန်းမေးတတ်သူတွေကလည်း ဘ၀ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုက အဖြေတွေကို ရှာဖွေနေကြချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတွေကတော့ မေးခွန်းတွေကို ရှာနေတတ်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေကနေတဆင့် အဖြေမှန်တွေ အလိုအလျောက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေတွေကတော့ မှန်ကန်တဲ့မေးခွန်းကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ယောက်က မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုက်ပြီဆိုရင် သူရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို အလွယ်တကူခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ သင်မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေက သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောင်မြင်ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မေးရမယ့် မေးခွန်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီမေးခွန်း(၁၀)ခုကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ မနက်ဖြန်မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေအတွက် ဒီနေ့လုပ်နိုင်တာတွေ အားလုံးလုပ်ပြီးပြီလား ?
တစ်နေ့တာ ကုန်ဆုံးသွားတိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေအတွက် ကျေနပ်စရာဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေ့ လုပ်နိုင်တာတွေ အားလုံးကို လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန်တိုင်းက ဒီအတိုင်းအဆင်ပြေနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အောင်မြင်မှုနဲ့ ပိုနီးစပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အခုလုပ်မယ့်ကိစ္စကို နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ရှင်းရှင်းပြောရရင် သင်သာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင် အခုလုပ်မယ့်ကိစ္စကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ ကြိုတွေးကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်မလာသေးပေမယ့် စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သင့်ရဲ့အနာဂတ်ပုံရိပ်နေရာကနေ ၀င်စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ဘယ်သူတွေက ကူညီပေးနိုင်မလဲ ?
အကူအညီလုံးဝမလိုအပ်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အကူအညီကို ရရှိဖို့အတွက် သင်လုပ်ရမှာက ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်ရုံ၊ အီးမေးလေးတစ်စောင်ပို့လိုက်ရုံပါပဲ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ကိစ္စတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် အကူအညီတောင်းဖို့ အားမနာပါနဲ့။ သန်းကြွယ်သူဌေးတွေ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ တာဝန်တွေကို အကူအညီတောင်းခြင်းအားဖြင့် ပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။
၄။ မနက်ဖြန်လိုချင်တာကို ရဖို့အတွက် ဒီနေ့ဘယ်လို လုပ်ဆောင်မလဲ ?
လူတိုင်းမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒီစိတ်တက်ကြွနိုးကြားလာဖို့အတွက် ယုံကြည်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဖြစ်ချင်စိတ် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းသေချာနေပြီဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သိသင့်ပါတယ်။
၅။ ရက်(၃၀)အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ တိုးတက်မှု(၃)ခုက ဘာတွေလဲ ?
ဘ၀မှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် တိုးတက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတိုးတက်မှုတွေကို မလုပ်ပဲရှောင်နေမယ့်အစား ဘ၀တိုးတက်မယ့်လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်လာအောင် မြှင့်တင်ပါ။
၆။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ လူများများဆီကို ဘယ်လိုတန်ဖိုးများများရောက်အောင် ပို့ဆောင်နိုင်မလဲ ?
သင့်အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ လူတွေအတွက် ပိုကောင်းလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကို သင့်ကိုယ်သင် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ ဒီမေးခွန်းက သင့်ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
၇။ နောက်ကောက်ကျနေစေတဲ့ အချက်ကို ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ?
ဒီမေးခွန်းက နည်းနည်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အများစုက ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို နောက်ကျအောင် ဆွဲထားတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင် ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။ ငွေကြေးအခြေအနေကောင်းချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်စရာရှိတာကို အခုပဲ လုပ်လိုက်ပါ။ နောက်တနည်းပြောရရင် တကယ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အရှုံးထဲမှာ နစ်မြုပ်မနေပါနဲ့။
၈။ နောက်(၃)လအတွင်း အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မလဲ ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ထားပြီး နောက်အချိန်(၃)လအတွင်းမှာ အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပါ။ ဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘ၀မှာ အံ့သြလောက်စရာ အားအင်တွေ ရရှိပြီး အခက်အခဲမှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ သင့်ကို လိုအပ်နေသူတွေအတွက် ဘယ်လိုပိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲ ?
သင့်အကူအညီကို တနည်းနည်းနဲ့ လိုအပ်နေသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် သေချာ ကူညီပေးလိုက်ပါ။ အိမ်ခြေရာမဲ့တွေကို ကူညီတာ၊ ဆေးရုံကလူနာတွေကို ပြုစုပေးတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်လုပ်ပေးနိုင်တာကို လုပ်ဆောင်ပြီး အကူအညီပေးပါ။
၁၀။ အလုပ်မှာ အရည်အသွေးရော အရေအတွက်ပါ တိုးတက်လာဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ ?
သင်လုပ်ဆောင်တဲ့ အလုပ်ပိုကောင်းလာတာက လူတွေကို ကူညီရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်မှာ အစစအရာရာ တိုးတက်လာတာက သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူတွေကို ပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောငျမွငျခမျြးသာခငျြသူတိုငျး မေးကွညျ့သငျ့တဲ့ မေးခှနျး(၁၀)ခု
မေးခှနျးတှဟော ဘဝကို ထငျဟပျနပွေီး မေးခှနျးမေးတတျသူတှကေလညျး ဘဝကို ထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ လူအမြားစုက အဖွတှေကေို ရှာဖှနေကွေခြိနျမှာ ခေါငျးဆောငျဖွဈသူတှကေတော့ မေးခှနျးတှကေို ရှာနတေတျပါတယျ။ မေးခှနျးတှကေနတေဆငျ့ အဖွမှေနျတှေ အလိုအလြောကျရရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဖွတှေကေတော့ မှနျကနျတဲ့မေးခှနျးကို မပေးနိုငျပါဘူး။ တဈစုံတဈယောကျက မေးခှနျးတဈခု မေးလိုကျပွီဆိုရငျ သူရဲ့နားလညျနိုငျစှမျးနဲ့ တှေးချေါနိုငျစှမျးကို အလှယျတကူခှဲခွားသိမွငျနိုငျပါတယျ။ သငျမေးတဲ့ မေးခှနျးတှကေ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အောငျမွငျခမျြးသာသူတဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ သငျ့ကိုယျသငျ ပွနျမေးရမယျ့ မေးခှနျးတှရှေိနပေါတယျ။ ဒီမေးခှနျး(၁၀)ခုကို စုစညျးဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ မနကျဖွနျမှာ ဖွဈခငျြတာတှအေတှကျ ဒီနလေု့ပျနိုငျတာတှေ အားလုံးလုပျပွီးပွီလား ?
တဈနတေ့ာ ကုနျဆုံးသှားတိုငျးမှာ လုပျဆောငျခဲ့တာတှအေတှကျ ကနြေပျစရာဖွဈနဖေို့လိုပါတယျ။ ဒီနေ့ လုပျနိုငျတာတှေ အားလုံးကို လုပျခဲ့မယျဆိုရငျ မနကျဖွနျတိုငျးက ဒီအတိုငျးအဆငျပွနေမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနညျးလမျးနဲ့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အောငျမွငျမှုနဲ့ ပိုနီးစပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ အခုလုပျမယျ့ကိစ်စကို နောကျတဈခြိနျမှာဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ?
ရှငျးရှငျးပွောရရငျ သငျသာ ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာရှိနမေယျဆိုရငျ အခုလုပျမယျ့ကိစ်စကို ဘယျလိုဆုံးဖွတျမလဲ ကွိုတှေးကွညျ့ဖို့ ဖွဈပါတယျ။ တကယျဖွဈမလာသေးပမေယျ့ စိတျကူးထဲမှာ ရှိနတေဲ့ သငျ့ရဲ့အနာဂတျပုံရိပျနရောကနေ ဝငျစဉျးစားကွညျ့ဖို့ ဖွဈပါတယျ။
၃။ အကူအညီတောငျးမယျဆိုရငျ ဒီနဘေ့ယျသူတှကေ ကူညီပေးနိုငျမလဲ ?
အကူအညီလုံးဝမလိုအပျဘူးဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ လိုအပျတဲ့အကူအညီကို ရရှိဖို့အတှကျ သငျလုပျရမှာက ဖုနျးလေးတဈခကျြဆကျလိုကျရုံ၊ အီးမေးလေးတဈစောငျပို့လိုကျရုံပါပဲ။ နှဈဦးနှဈဖကျစလုံးအတှကျ အကြိုးရှိစမေယျ့ ကိစ်စတှေ ရှိမယျဆိုရငျ အကူအညီတောငျးဖို့ အားမနာပါနဲ့။ သနျးကွှယျသူဌေးတှေ အားလုံးက သူတို့ရဲ့ တာဝနျတှကေို အကူအညီတောငျးခွငျးအားဖွငျ့ ပွီးစီးအောငျလုပျဆောငျတတျကွပါတယျ။
၄။ မနကျဖွနျလိုခငျြတာကို ရဖို့အတှကျ ဒီနဘေ့ယျလို လုပျဆောငျမလဲ ?
လူတိုငျးမှာ တဈခုခုဖွဈခငျြတဲ့စိတျဆိုတာရှိပါတယျ။ ဒီစိတျတကျကွှနိုးကွားလာဖို့အတှကျ ယုံကွညျမှုလိုအပျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ အနာဂတျအတှကျ ဖွဈခငျြစိတျ (၁၀၀)ရာခိုငျနှုနျးသခြောနပွေီဆိုရငျ ဘာလုပျရမလဲဆိုတာကို သိသငျ့ပါတယျ။
၅။ ရကျ(၃၀)အတှငျး လုပျဆောငျနိုငျတဲ့ တိုးတကျမှု(၃)ခုက ဘာတှလေဲ ?
ဘဝမှာ လုပျဆောငျရမယျ့ တိုးတကျမှုတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီတိုးတကျမှုတှကေို မလုပျပဲရှောငျနမေယျ့အစား ဘဝတိုးတကျမယျ့လမျးကွောငျးကို ရှာဖှပေါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို တိုးတကျလာအောငျ မွှငျ့တငျပါ။
၆။ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ လူမြားမြားဆီကို ဘယျလိုတနျဖိုးမြားမြားရောကျအောငျ ပို့ဆောငျနိုငျမလဲ ?
သငျ့အနနေဲ့ ဖွဈနိုငျသမြှ အမွနျဆုံးနညျးလမျးနဲ့ လူတှအေတှကျ ပိုကောငျးလာအောငျ ဘယျလိုလုပျပေးနိုငျမလဲ ဆိုတာကို သငျ့ကိုယျသငျ ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ ဒီမေးခှနျးက သငျ့ရဲ့လှမျးမိုးနိုငျစှမျးကို တိုးမွှငျ့ပေးဖို့ အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။
၇။ နောကျကောကျကနြစေတေဲ့ အခကျြကို ပွငျလိုကျမယျဆိုရငျ ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ ?
ဒီမေးခှနျးက နညျးနညျးခကျခဲပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောတို့အမြားစုက ကိုယျ့ရဲ့အောငျမွငျမှုကို နောကျကအြောငျ ဆှဲထားတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှကေို ပွုပွငျဖို့ဆိုရငျ ခကျခဲတတျကွပါတယျ။ ငှကွေေးအခွအေနကေောငျးခငျြတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခခြငျြတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဆေးလိပျဖွတျခငျြတာပဲဖွဈဖွဈ လုပျစရာရှိတာကို အခုပဲ လုပျလိုကျပါ။ နောကျတနညျးပွောရရငျ တကယျအောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ အရှုံးထဲမှာ နဈမွုပျမနပေါနဲ့။
၈။ နောကျ(၃)လအတှငျး အပွီးသတျလုပျဆောငျရမယျ့ ရညျမှနျးခကျြတဈခုရှိခဲ့မယျဆိုရငျ ဘာလုပျမလဲ ?
ကိုယျ့ကိုယျကို ပွငျဆငျထားပွီး နောကျအခြိနျ(၃)လအတှငျးမှာ အပွီးသတျဆောငျရှကျဖို့လိုအပျတဲ့ ရညျမှနျးခကျြတဈခုအပျေါမှာ အာရုံစိုကျပါ။ ဒီလိုလုပျနိုငျမယျဆိုရငျ ဘဝမှာ အံ့ဩလောကျစရာ အားအငျတှေ ရရှိပွီး အခကျအခဲမှနျသမြှကို ရငျဆိုငျကြျောဖွတျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၉။ သငျ့ကို လိုအပျနသေူတှအေတှကျ ဘယျလိုပိုဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမလဲ ?
သငျ့အကူအညီကို တနညျးနညျးနဲ့ လိုအပျနသေူတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သငျကူညီပေးနိုငျမယျဆိုရငျ သခြော ကူညီပေးလိုကျပါ။ အိမျခွရောမဲ့တှကေို ကူညီတာ၊ ဆေးရုံကလူနာတှကေို ပွုစုပေးတာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ သငျလုပျပေးနိုငျတာကို လုပျဆောငျပွီး အကူအညီပေးပါ။
၁၀။ အလုပျမှာ အရညျအသှေးရော အရအေတှကျပါ တိုးတကျလာဖို့ ဘယျလိုလုပျဆောငျမလဲ ?
သငျလုပျဆောငျတဲ့ အလုပျပိုကောငျးလာတာက လူတှကေို ကူညီရာရောကျပါလိမျ့မယျ။ အလုပျမှာ အစစအရာရာ တိုးတကျလာတာက သငျ့ရဲ့ထုတျကုနျ ဒါမှမဟုတျ ဝနျဆောငျမှုကို အသုံးပွုသူတှကေို ပိုပွီးတော့ ထိထိရောကျရောကျ အကြိုးရှိစမှော ဖွဈပါတယျ။
Previous: ယုံကြည်မှုရှိသည့် ကိုယ်နေဟန်နည်းလမ်း (၁၀)
Next: လေ့လာသင်ယူသမျှ အမြဲတမ်းမှတ်မိနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု